Lubbotaa fi Hirmatotaaf - Project dldl/ድልድል
Lubbotaa fi Hirmatotaaf
Projekktiin Dildil jedhamu kanaan duraa lubbotaa fi hirmatoota irratti qoranoo kan ademsifameef deebii kan kennu dha. Itiyoophiyatti keessattu baadiyatti lubonii argaman rakkoo (hanqinna) bekkumsaa dhabuu fi sababa adda addan haqinaa barumsaa Tiyoologi baay’ee gaddi bu’aa ta’uu isaa irraa kan ka’een tajaajilaa adda adda akka hin tajaajilee isaan danqee jiraa.
Rakkoo haadha mana fi abaa mana jidduti umamee lubonni abaa amanta ta’aani dhiyaatu.Yeroo bay’ee luboota rakkoo akkaan yoo mudate daandiin isaan furmataa itti fidhaan ishee dubaraa rakkoo bay’ee keessa akka jiraatu gorsuu irratti kan hunda’e. Haa ta’uu malee lubboni baay’een waaligaltee isaan diyeessaan umanii kan hin fudhanee yoo ta’uu yaadni kun adaa bodatti haafa waalin kan waal qabaate dha. Kunis rakko cimaa saala kan saaxiluu adaa bodatti haaf ta’uun isaa hubatameera.
Qabeenyii kutaa kan keessatti ramadamee Lubbota amanta orthodoksii tawahidoo keessa jiraan gargaruuf kan karorffamee dha. Kanaafuu Lubbonni Rakkoowwan waal-xaxaa akkana furuf barumsaa Tiyoolojii ga’aa ta’ee akka argataan tasiisuu, Fudhaa fi herumaa jiduutti marii adeemsiisuu fi bekkumsaa akka argataan tasiisuu.
Akkasumas balaa irra kan egameefi saafartuuwan onne tilmaama kessa kan galchee furmaata kennuu waraa midhan irraa gahee qaama midaa qaqabsaan. Kunis kan armaan gadii kan off keessaa qabuu bu’aa qoranoo adda adda hubaate akka yaada ofii isaatii bareessuu fi wantoota barbachisaan walitti guruun warkii shitti (lenjii) baay’ee damaqsaa ta’ee dha. Hojiiwwaan kun dalaaga adda adda barsiisuu yoo ta’uu biyyaa Itiyoophiyaa waraa lubbonni fi abba qabeenya tajajilaa kennani dha.